चक्रेलाई खानतलासीपछि डनहरु सतर्क « रिपोर्टर्स नेपाल
(Thursday 21st January 2021)
चक्रेलाई खानतलासीपछि डनहरु सतर्क
प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७७, मंगलबार
काठमाडौं, १६ मंसिर । काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखामा नयाँ नेतृत्व आउने बितिक्कै विगतमा आक्रामक कार्यशैली देखाउँथे । नयाँ हाकिम आएपछि केही गुन्डा र हुन्डी कारोबारी पक्राउ गर्नु तथा होटलहरुमा छापा हान्नु एउटा ‘चलन’ नै बनेको थियो ।
केही वर्षयता यस्तो चलन कम भयो । सेटिङ मिलाउनका लागि यसरी पक्राउ र छापा हान्ने गरेको भन्दै प्रहरीको आलोचना भएपछि यस्तो चलन रोकियो । गत साता काठमाडौं परिसरमा आएका एसएसपी अशोक सिंहले भने पुरानै चलन ब्युँताएका छन् ।
परिसर आएको एक साता नहुँदै उनले गुन्डा अप्रेसन सुरु गरेका छन् । उनको निर्देशनमा आइतबार काठमाडौंका पुराना डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई खानतालासी लिइएको छ । दरबारमार्गमा उनी चढेको गाडी रोेकेर प्रहरीले खानतालासी लिएको हो ।
यो घटनाले अन्य गुन्डानाइकेहरु नेता र अन्य प्रहरीमाथि एसएसपी सिंहलाई सेटिङ मिलाउनतर्फ लागेका छन् । काठमाडौंमा अहिले पुराना डनहरु सुस्ताएका छन् । सांसद भएपछि तथा ठमेलको व्यापार सुस्ताएपछि दीपक मनाङे धेरै जसो पोखरातिरै बस्न थालेका छन् । गणेश लामा व्यापार नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका छन् । मिनकृष्ण महर्जन ढुंगाखानीबाट कमाएको पैसाबाट कांग्रेसको राजनीतिमै सक्रिय छन् । राजु गोर्खाली अस्पताल तथा रेस्टुरेन्टको व्यापारमा लागेका छन् । उनी अझै पनि बेला बेला विवादमा पर्ने गरेका छन् । स्वयम्भु क्षेत्रका बाघे निर्माण सामाग्रीको व्यवसायमा आबद्ध छन् ।
काभ्रेली समूहका दावा लामा, विष्णु लामा लगायत केही अझै सक्रिय रहेको प्रहरीको सूचना छ । ठुला डनहरु सुस्ताएपनि टोलेहरुको दादागिरी भने पूर्ण रुपमा बन्द हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ प्रहरीले ध्यान दिन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय गुन्डागर्दी गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगाखानीमा छ । त्यो क्षेत्रमा पैसा धेरै भएकाले गुन्डाहरु त्यसैमा लगानी गर्न थालेका छन् । अन्य व्यक्तिहरुले पनि गुन्डासँग सेटिङ नमिलाई चलाउन नसक्ने अवस्था छ । राजनीतिक दलको आवरणमा यस्ता व्यवसायमा उनीहरु लागेका हुन् । केही भने मिटर ब्याज र जुवाको धन्दामा रहेको स्रोत बताउँछ ।
लागूऔषध सहित पक्राउ
काठमाडौं, ७ माघ । अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट ३ जना पक्राउ परेका छन् ।
लेनदेन मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
बारा, ७ माघ । लेनदेन मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लेनदेन मुद्दाका
काठमाडौं, ७ माघ । विभिन्न हातहतियार सहित किशोर पक्राउ परेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका–१९ बाउन्न
किशोरी बलात्कार गर्ने भारतीय किशोर पक्राउ
कञ्चनपुर, ७ माघ । जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक किशोर पक्राउ परेका छन् । १७
भन्सार छलि ल्याएको डिजेल सहित पक्राउ
मोरङ, ७ माघ । अवैध रुपमा भन्सार छलि ल्याएको डिजेल सहित २ जना पक्राउ परेका
मोटरसाइकल आउटराईडर्स तालिम सुरु
काठमाडौं, ७ माघ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको तत्वावधानमा संचालित २०औं समूहको मोटरसाइकल आउटराईडर्स
सुनचाँदीका गहना दुई पक्राउ
सर्लाही, ७ माघ । सर्लाहीमा भन्सार छली ल्याएको चाँदीका गहना र सुनसहित दुई जना पक्राउ
बालिका करणी गर्ने युवकलाई २० वर्ष कैद
भोजपुर, ६ माघ: जिल्ला अदालत भोजपुरले १४ वर्षीय बालिकालाई जबरर्जस्ती करणी गर्ने एक युवकलाई २०
भारतले दिएको खोप काठमाडौंमा, कति प्रभावकारिता छ ? डा. पुन यसो भन्छन् (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ८ माघ । सुरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले आजबाट नेपालमा आएको कोरोनाविरुद्धको खोपको
मन्त्री त्रिपाठीको दाबी : माधव नेपाल र प्रचण्डलाई जेल हाल्ने कुरा अफवाह मात्रै (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ८ माघ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले माधव नेपालले ‘मलाई र प्रचण्डजीलाई’ जेल
भारतबाट १० लाख डोज भ्याक्सिन आयो
काठमाडौं, ८ माघ । भारतले सहयोगस्वरुप दिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल आएको छ । आज